04 / 09 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: စက်တင်ဘာလ42019
TCDD6ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုMıntıka6နှုန်း 2019 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး 332783 ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 424.049,62 / 660.161,48 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို6TL နှင့် TCDD ၏အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating တင်ဒါရလဒ် [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး Adana6၏ပေါ့ပါးUlukışlaလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating တင်ဒါရလဒ်။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု 2019 ပေါ့ပါးUlukışlaအကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ (TCDD) 333876 / 373.442,62 589.524,00 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL နှင့် TL, [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဥက္ကဌ Ekrem ကွန်ကရစ်၏ကျယ်ပြန့မြို့တော်ကို ယူ. တို့အားဤသို့သောသစ်ကိုတံခါးနှငျ့ရထားလမ်းအဖြစ်အတူတကွအမည်ရအစည်းအဝေး DCC ဗျူရိုကရက်, "နယူးနှစ်ဆလမ်းများ, စမတ်လမ်းဆုံ, signal စနစ်များ, စက်ဘီးလမ်းကြောင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လာ. [ပို ... ]
သင့်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်ဓါတ်ရထားဘူတာကိုထုတ်လုပ်။ Metro အစ္စတန်ဘူလ်, Metris လမ်းရထားမှတ်တိုင် 8,4 kW နေရောင်ခြည် System ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့၏ IMM လက်အောက်ခံ။7နှစ်လိုအပ်သောအိမ်ထောင်စုစွမ်းအင်က၎င်း၏လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပါဝါဘူတာရုံမှတဆင့်စနစ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အများဆုံး [ပို ... ]
5 စတားစီမံကိန်းမှ Boztepe!
Boztepe အတွက်တပ်မတော်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဟာတိမ် "စီမံကိန်းတင်ဒါအဆိုပါရှုခင်း၏ဖန်ဆင်းခဲ့သည် Four Seasons Touch ကို '' တို့ကသဘာဝနဲ့အညီတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler "5 ဇာတ်စင်ပါဝင်သည်ဟုစီမံကိန်းများ၏ဆွဲဆောင်မှု Boztepe ပထမအဆင့်ပြီးစီးထားပြီးတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
ကြည်းတပ်အတွက်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း2။ နှောင်းပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ဇာတ်စင်
ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းဟာကြည်းတပ်ရဲ့ရွှေ Horde ရဲ့2၏ခရိုင်အတွင်းရှိအကောင်အထည်ဖော်ခံရ။ ဇာတ်စင်ဘဝထံသို့မရောက်ရ။ မကြာမီတွင်တနည်းသမဝါယမအလုပ်၏ဦးတည်ခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်များကို၏နယ်ပယ်အတွင်းမသန်စွမ်းလူတို့အဘို့တယောက်ခေါင်မိုးအောက်မှာပေါင်းစပ် Uzunis, Karacaömer, စတား, Eskipazar လက်လှမ်းမတိုင်မီ [ပို ... ]
rayhab 04.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
တံတားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırအလားတူမီးရထားသတင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားအခြား haberlerrayhab ၏ဖြစ်နိုင်သည်စီးပွားရေးကို Maintenance ပြုလုပ်ခြင်း၏ 09.01.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ 09 / 01 / 2019 အဆောင်ဘူတာနောက်ဆက်တွဲ Gare နည်းလမ်းများသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိ Repair rayhab လိမ့်မယ် 03.01.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ 03 / 01 / 2019 သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းAlınacaktırဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
တူရကီအတွက်မိုဘိုင်းလက်မှတ် (မိုဘိုင်းလက်မှတ်) ကာလစတင်
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်မြို့တော်နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြို့တော်မှလာမယ့်သုံးပြီး ANKARAKART မိုဘိုင်းလက်ကိုင်ဖုန်း (Mobile လက်မှတ်တွေ) မိမိဘဝ applications များသုံးစွဲကြီးမြတ်အဆင်ပြေပေးပါလိမ့်မယ်။ အထွေထွေမန်နေဂျာ Nihat Alkaş, ဘတ်စ်ကားအတ္တ, ရထားလမ်းနှင့် [ပို ... ]
ရွာကျက်စားရာအရပ်၏အရပ်ကွက်အတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်သည့် ropeway စီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင် Sapanca Hasanpaşaနိုင်ငံသားများခုခံနေကြသည်။ ရဲကိုစောင့်ရှောက်ပြည်နယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေသည်မတိုင်မီ Sapanca Kırkpınarရပ်ကွက်အတွင်းကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုတစ်ပူပအချိန်နှင့်အတူတင်ဒါခဲ့သည်အစီအမံယူနေစဉ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုစောင့်ကြည့် [ပို ... ]
တူရကီရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်မှုကမ္ဘာကြီးနိုင်ငံတွေ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ တူရကီချက်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Andrej Baby အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတခုစီးရီးများအတွက်, "ကျနော်တို့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ရှိလုပ်ပါ။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကွန်ရက်နှင့်မြင့်မားသောဖြည့်စွက်ရန် [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်လိုအပ်လမ်း, Boulevard, ဉမင်လိုဏ်ခေါင်း, အပန်းဖြေဒေသများနှင့်သုဿာန်အလုပ်မီးမလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Hacettepe Boulevard အလင်းရောင်အလုပ်တက္ကသိုလ်နှင့် Bilkent စီးတီးဆေးရုံ, မြို့တော်အကြားဆက်လက် [ပို ... ]
တူရကီအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်များနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များသမဂ္ဂ (ကုန်သည်ကြီးများအသင်း) Adana မြို့ပြယာဉ်ကြောပြဿနာကိုဆွေးနွေးရန်အလုပ်ရုံစည်းရုံးလိမ့်မယ်။ လျင်မြန်ခြင်းနှင့် unplanned ဖွံ့ဖြိုးရေး, ICC ကအတွင်းရေးမှူး Erol Salman, သက်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Adana Adana ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက်မြို့ပြရလဒ်များကို၏နာကျင်ဖြစ်စဉ်ကိုကြုံတွေ့ကြောင်းညွှန်ပြ [ပို ... ]
ပြည်သူ့ Market က၏ulaşımparkနာရီ
affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Inc ကို, ကြာသပတေးနေ့နှင့်စနေနေ့ 11 နှင့်လမ်းရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူဖျော်ဖြေနေသည်အများပြည်သူစျေးကွက်အတွင်းမှနိုင်ငံသားများအဘို့အလိုင်း access ကိုတည်ထောင်ulaşımpark။ အခြားအရက်နိုင်ငံသားများနှင့်အများပြည်သူစျေးကွက်နှင့်အတူ 11 လိုင်းများ၏တည်ထောင်ခြင်းများလက်ထက်၌Doğukışla- [ပို ... ]
ကြောင်းÇeltikçiKarasılနှင့် ဆက်စပ်. ဖြိုဖျက်နှင့်Çardakköyပျက်ကျမှုကြောင့်ရပ်ကွက်အတွင်း၏ပေမယ် Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်သက်တမ်းတိုးတံတား၏အလယ်တွင်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်များကို Larissa ရပ်ကွက်အတွင်း, Yolörenမြို့ဖြတ်သန်းပြောပြပါ။ အစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်ရန် Bursa ၏အခြေခံအကျဆုံးပြဿနာ Access ကို [ပို ... ]
6-15 88 စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ Izmir အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲအချိန်ကာလအတွင်းတိုးချဲ့ထားပြီးယင်းအပိုဆောင်းအချိန်ကြောင့်အတွင်းစိတ်-မြို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူအားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့ကူးတို့အဆင်းလှသောညစဉ်ညတိုင်းဇီးကွက်စဉ်အတွင်းလေ့လာရေးခရီးစေမည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့ရဲ့ [ပို ... ]
တူရကီ၏ရန်းအမျိုးသားလွှတ်တော် (ပါလီမန်), နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုဂန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏လက်ခံရရှိမှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးသောပြောပါရန်စီမံကိန်းနှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Lutfi Elvan ရဲ့ Mersin မြေအောက်ရထား, Mersin နိုင်ငံသားများ၌ကြီးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က short [ပို ... ]
ယနေ့တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလိုက်လျောအောက်ရှိ Samsun-Sivas လိုင်းများ၏သမိုင်း4စက်တင်ဘာလ 1913 ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြင်သစ်အစိုးရ General မှကုမ္ပဏီများအားပေးခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက် xnumx't အတည်ပြုထားသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအော်တိုမန်အင်ပါယာအခွင့်ထူးများကလျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်ကြောင့်စစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးbaşlamayınစတင်ခဲ့သည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားကနေစက်တင်ဘာလ 19144[ပို ... ]